Isikhokelo sePawulo lokuFikelela kwi-iPad
Ikhompyutheni yokufumana i-iPad
Indlela yokuvula iifayile zokufikelela kwi-iPad
Izicwangciso zokufikeleleka kwe-iPad zinokukunceda ukwenza i-iPad ibe luncedo ngakumbi kubantu abanombono okanye iingxaki zokuvavanya, kwaye kwezinye iimeko, bancede nabanemicimbi yenyama okanye imoto. Izicwangciso zokufikeleleka zingakuvumela ukuba ukwandise ubungakanani befonti engagqibekanga, faka i-iPad kwimodi ye-Zoom ukuze ukhangele bhetele kwesikrini, kwaye ude uthethe itekisi kwiskrini okanye usebenzise imibhalo engezantsi kunye neenkcazo-magama.
Nantsi indlela yokufumana izilungiso zokufikelela kwi-iPad:
Okokuqala, vula izicwangciso ze-iPad ngokuthinta isithonjana sesethingi. Fumana indlela ...
Emva koko, pheqa phantsi kwimenyu ekhohlo uze ufumane "Jikelele". Thepha "Into ejwayelekile" ukulayisha izicwangciso eziqhelekileyo kwiwindow yangakwesokudla.
Kwizicwangciso eziqhelekileyo, khangela izicwangciso zokufikeleleka. Zifumaneka kufuphi phezulu kwinqanaba eliqala nge " Siri " kwaye nje ngentla " Iimpawu zokuThola iMultitasking ". Ukuthabatha inkinobho yokuFikelela kuza kuvulwa iskrini kufaka zonke iinketho zokwandisa ukusebenza kwe-iPad.
- Ubunzulu-bubuke Jonga kwi-iPad Izixhobo zokufikelela ->
I-iPad Isixhobo sokufumana
Izicwangciso zokufikeleleka kwe-iPad zihlukaniswe zibe ngamacandelo amane, ezibandakanya ukuncediswa kombono, ukuncedwa kweendlebe, ukufikelela ekukhokhelweni kokufunda kunye nezicwangciso zokuncedisa umzimba kunye nezixhobo. Ezi zicwangciso zingabancedisa abo bangenayo ingxaki ekusebenziseni ithebhulethi banandipha i-iPad.
Ukuba unenkathazo yokufunda enye itekisi kwiskrini, unokwandisa ubungakanani befonti ngokusifakela iqhosha le "Uluhlu Olukhulu" kwisetya sesibini sesilungiselelo sombono. Ubungakanani befonti lunokunceda i-iPad ukuba ifundeke kalula, kodwa ezi zicwangciso zisebenza kunye neefowuni ezixhasa ifonti ekhoyo. Ezinye iinkqubo zisebenzisa amafonti angokwezifiso, kunye neewebhsayithi ezijongwe kwi-browser yeS Safari aziyi kufikelela kulo msebenzi, ngoko ukusebenzisa isenzo-zoom zoom usenokufuneka xa uphengulula iwebhu.
Ukuba unqwenela ukuvula isicatshulwa-intetho , ungavula "Xela ukhetho". Le yimiqathango yabangakwazi ukubona i-iPad ngokucacileyo, kodwa kunzima ukufunda itekisi kuyo. Ukukhetha ukuthetha kukuvumela ukuba ukhankanya umbhalo kwiskrini ngokuthepha ngomunwe uze uthethe loo ngqangi ngokukhetha inkinobho ethi "thetha", yinkinobho ekude ekunene xa ukhankanya umbhalo kwiskrini. Inketho ethi "Thetha nge-Auto-text" iya kuthetha ngokuzenzekelayo izilungiso ezinikezwe ngokusebenza ngokuchanekileyo kwe-iPad. Fumana indlela yokucima i-Auto-Correct.
Ukuba unobunzima bokubona i-iPad , unako ukuvula i-Zoom mode. Inkinobho yokucoca i-Zoom izakuvula ukukhetha ukubeka i-iPad kwimodi ye-Zoom, ephakamisa isikrini ukukunceda ukuba uyibone. Ngexesha lokwimodi yeSowom, awuyi kukwazi ukubona yonke isikrini kwi-iPad. Ungayifaka i-iPad kwimodi ye-Zoom ngokuphindaphinda kabini iminwe ukuze usondeza okanye usondeza. Ungashenxisa isikrini ngokujikeleza iminwe emithathu. Ungenza kwakhona imodi yoLwazi ukuba lusebenze ngokuguqula i-Zoom "Ukufinyeleleka kweNgcaciso" phantsi kweendlela zokufikelela.
Ukuba unobunzima obunzima bokubona , unako ukuvula ukusebenza kwezwi ngokuthethelela inketho ye "VoiceOver". Le yindlela ekhethekileyo eguqula indlela yokuziphatha ye-iPad ukwenzela ukuba ifikeleleke ngakumbi kubantu abanemibono enzima yombono. Kule ndlela, i-iPad iya kuthetha okuthethiweyo, ukuvumela abo baneemboniselo ukuba bahambe nge-touch ngaphandle kokubona.
Ungakwazi ukuguqula imibala ukuba unobunzima bokubona ngokuhlukileyo. Le ndlela isetwork system, ngoko kuya kusebenza kwiifoto kunye nevidiyo kunye nesicatshulwa kwisikrini.
Indlela yokuxhuma i-iPad kwiTV
I-iPad isekela imixholo engezantsi kunye neenkcazo , eziza kunceda abo banemiba yokuvalelwa bebhenwa kunye nevidiyo kwi-iPad. Emva kokuba uthayiphe inkqutyana engezantsi kunye neenkcazo zeNgcaciso, ungayiguqula ngokuchopha iqhosha ukuya ngakwesokudla "Iingcaphuno ezivaliweyo ze-SDH".
Kukho izitayela ezininzi zegama-magama ekukhethiweyo kwaye unokwenza ngokwezifiso iifayile ngokukhetha ifonti, ubungakanani bombhalo oyisiseko, umbala kunye nombala ongasemva. Ungakwazi kwakhona ukuvula i-Mono Audio ngokuthepha iqhosha, kwaye uguqule i-balance balance phakathi kweendlela ezisekhohlo kunye nezisekunene, ezixhamlayo kulabo abanemiba yokuvavanya kwindlebe enye.
I-iPad nayo isekela ukudibanisa kwevidiyo ngokusebenzisa i-FaceTime app. Lolu hlelo lokusebenza lukhulu kulabo abanemiba evelele ngokwaneleyo ukukhubaza iifowuni. Kwaye ngenxa yesikrini sayo esikhulu, i-iPad ingcamango ye-FaceTime. Funda kabanzi malunga nokuseka i-FaceTime kwi-iPad .
Isimo sokuFikelela ukuThola isiGqeba sikhulu kulabo abanemiqobo yokufunda, kubandakanywa ne-autism, ingqwalasela kunye nemingeni. Isimo sokuHlola sokuHlola sivumela i-iPad ukuba ihlale ngaphakathi kwiprogram ethile ngokukhubaza iPhampu yaseKhaya, eqhelekileyo isetyenziswe ukuphuma kwiprogram. Okubalulekileyo, ivula i-iPad kwindawo kunye nenkqubo enye.
I-iPad ye-Guided Access feature ingasetyenziselwa ngokubambisana neenkqubo ezincinci zokubonelela ukuzonwabisa kwiintsana kunye nabantwana, nakuba ukusetyenziswa kwe-iPad kufuneka kubekwe kumancinci angaphantsi kweminyaka emibini .
Izixhobo zoMzimba / zeziThuthi:
Ngokungagqibekanga, i-iPad sele isenele ngoncedo kulabo abanenkinga yokusebenzisa iinkalo ezithile zeethebhulethi. I-Siri inokuyenza imisebenzi efana nokucwangcisa isiganeko okanye ukubeka isikhumbuzi ngelizwi, kwaye ukuqaphela ukuthetha kwe-Siri kungaguqulelwa kuba yinto yokubethelwa ngezwi ngokuthepha iqhosha le-microphone nakubonini ikhibhodi kwisikrini iboniswa.
Ukusekwa kweTechTouch ikwaba yindlela enkulu yokwandisa ukusebenza kwe-iPad. Akunakuphela kuphela oku kusetyenziswa ukunikezela ngokukhawuleza nokulula kwi-Siri, eqhelekileyo ngokufumaneka ngokukrofa iqhosha lasekhaya, ivumela ukuba kuthathwe imiqondiso yesintu kunye nemiqondiso eqhelekileyo eyenziwa ngokusebenzisa inkqubo yemenyu iboniswe kwisikrini.
Xa i-AssistiveTouch isebenze, iqhosha liboniswa ngamaxesha onke kwicala lasezantsi le-iPad. Le qhosha isebenza kwimenyu kwaye ingasetyenziselwa ukuphuma kwisikrini sasekhaya, ukucwangcisa izicwangciso zeedivayili, ukwenza iSiri isebenze kwaye wenze isenzo esithandayo.
I-iPad nayo isekela ulawulo loTshintsho , oluvumela ukuba iinkcukacha zokungena kwiqela le-third party likwazi ukulawula i-iPad. Iifayile ze-iPad zivumela ukuba kwenziwe ngokwezifiso ukulawula ukutshintsha, ukususela ngokucwangcisa kakuhle ukulawula ukubeka imiphumo yesandi kunye nokuthintwa kwempawu. Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga nokusetyenzwa nokusetyenziswa koLawulo lokuTshintsha, bhekisa kwi-Apple Control Switch Control documentation.
Kulabo abafuna uncedo ngokuchofoza kabini inkinobho yasekhaya, iqhosha lasekhaya linganciphisa ukuze lenze kube lula ngokungena kwiKhowudi yeKhaya. Isilungiso esingagqibekanga singaguqulelwa kwi "Slow" okanye "Sinciphisa", ngasinye sinciphisa ixesha elifunekayo phakathi kokuchofoza ukwenza isebenze ngokukhawuleza kabini okanye ukucofa kathathu.
Ukufikeleleka kweNgcaciso kusekwe ekupheleni kwezicwangciso zokufikeleleka, okwenza kube lula ukuphosakela ukuba awukwazi apho ikhona khona. Le ndlela emfutshane yenza ukuba ubeke isilungiselelo sokufikeleleka njenge VoiceOver okanye Zoom kwiqhosha elinesithathu kwinkinobho yasekhaya.
Le ndlela emfutshane inceda kakhulu ukwabelana nge-iPad. Endaweni yokuzingela indawo ethile kwicandelo lokufikeleleka, ukhenketho kathathu lweqhosha lasekhaya lungaqalisa okanye lusekho ukucwangcisa.
Indlela yokulayisha kunye nokugcina idatha yeeMidlalo kwi-SDK ye-SDK
Indlela yokuseta i-iPad kwiSetyenziswa kokuQala kwexesha lokuQala
Isikhokelo kwiziko lezaziso ze-iPad
Indlela yokukhusela izikhangiso kwi-iPad yakho
Indlela yokukhusela iPain yakho engabantwana
Indlela yokujongana noMngeni kuMdlalo weMidlalo
Indlela yokugcina iWebhsayithi kwiKhaya leKhaya kwi-iPad yakho
Indlela Yokubukela I-TV Kwi-iPad yakho
Indlela yokususa isicelo kwi-iPad yakho
Iyini Inombolo YesiXhosa kwaye Kutheni Isetyenzisiwe?
Xa i-Red Xs ibonisa kuMenzi we-Movie esikhundleni seMifanekiso
5 Essential Wii Homebrew Izicelo
Indlela yokufometha C Ukusuka kwi-Windows Setup Disc
I-Outlook.com yeeNkonzo ze-imeyile yamahhala
Ngeeyure Iimali eziPhezulu zeProjekthi zeMpawu zeMifanekiso
Ungayifaka njani i-Browser Favorites kwi-Microsoft Edge
Ngaba iipilisi zikhuselekile ngokwaneleyo ekusebenziseni kwishishini?
Sebenzisa 'Fumana i-iPhone yami' ukufumana ifowuni elahlekileyo okanye eyebiweyo
Isikhokelo sokubonakalisa iithebhulethi
Yintoni i M File?
IiKlasi zoPhuhliso lweWebhu
Yongeza umfanekiso kwi-imeyile ye-Hotmail okanye ye-Outlook ye-imeyile
Ngaba Ndiyakwazi Ukuphucula okanye Ukutshabalalisa kwi-OS X Snow Leopard (OS X 10.6)?
I-Kerio MailServer 5.7.9 - I-Mail Server
I-SATA ye-15-Pin Power Power Connector
Indlela yokutshisa ama-CD kunye ne-iTunes
Zingaphi Iingoma Zingayifumana KwiWindows CD?
Yenza Ucoceko olucocekileyo lwe-OS X Yosemite kwi-Mac yakho